कथा : पश्चातापको पाठ
2079-Jestha-07 || मध्यान्ह
– रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’
विद्यालयको सबैभन्दा कमजोर विद्यार्थी हो गोपाल । परीक्षामा सधैँजसो गाली र सजायको ठेक्का बोकेको उसमा सबैको नजर पथ्र्यो । जसरी जान्ने विद्यार्थीमा माया बर्सिन्छ त्यसै गरी पढाइमा कमजोर भएको उसमा पनि प्रायः शिक्षकलगायत घर परिवारको उत्तिकै गाली बर्सिन्थ्यो । एकदिन डाँडा गाउँबाट उसको घरमा मामा आउनुभएको थियो । उहाँले उसलाई माया गरेर भन्नुभयो, “ओहो ! भान्जा बाबु त लाठे भइसकेछन्, अनि पढाइ कहाँ पुग्यो ?” मामाको स्वर एकाएक उसकी आमाको कानसम्म पुगेपछि आमाको क्रोध वर्षिन थाल्यो, “यसको के कुरा गर्नु, भुस छ भुस, यसको पढाइको कुरा नसोध् भाइ । यसलाई खेल्न पाए पुग्छ । दोश्रो त्रैमासिक परीक्षामा पनि आठवटा विषयमा सातवटामा तारा लागेको छ । गणितमा ६ महिना पढेर ३ नम्बर ल्याइर’छ ।”
आमाको गालीले ठूलो रूप लेला भन्ने डरले ऊ आफ्नो कोठामा जान बाध्य भयो । कहिलेकाहीँ बाबाले गाली गर्नुहुँदा आमाले थप्न बाँकी राख्नुहुन्नथ्यो । अब त उसलाई आफन्तकोमा मात्र होइन समाजमा समेत मुख देखाउन लाज हुने भइसक्यो । ऊ प्रायः कोठैमा बसेर दिन काट्ने कुरामा अभ्यस्त थियो । एकान्तप्रेमी उसले मलाई त अलिअलि उसका मनका भावना पोख्थ्यो तर, मैले उस्तो गम्भिर पनि लिँदिनथेँ ।
एकदिन विज्ञान विषयको शिक्षकले उसलाई गाली गर्दै भन्नुभयो, “यस्तो भुस दिमाग भएकोले जीवनमा केही गरिखाला त, अहँ, खोइ तैँले पढेर खाँदैनस् । बरु गोरुलाई कक्षामा राख्दा अलिकति बुझ्ला तैँले के बुझ्लास् र । पृथ्वीको भार रै’छस् ।”
‘आफ्नो कमजोरी आफैंलाई थाहा छैन’ गोपालले मलाई भन्ने गथ्र्यो, “हेर् ललित, म त वास्तवमै पढाइमा कमजोर छु । तैँले राम्रो पढ्नु । म घरमा आमाबाबाको आँखाको तारो छु । स्कुलमा प्रायः शिक्षकको गाली र सजाय नपाएको दिन हुँदैन । तर म के गरुँ ? मलाई कुनै आइडियै आउँदैन । वास्तवमा मलाई कसैसँग बोल्न, कुरा गर्न, कसैकोमा जान मन लाग्दैन । जसकोमा गए पनि पहिला पढाइकै कुरा निस्किन्छ । खै, म त आफैंलाई आफू भार भएकोजस्तो लाग्छ ।” तर मैले पनि नसम्झाउने गरेको त कहाँ हो र तर मनको वह कतिसम्म डरलाग्दो बन्दो रहेछ ।
गोपालकी आमाले मलाई देख्नासाथ एक्कासि अँगालो हालेर गोपालले घर छाड्नुको कारण सोध्न थाल्नुभयो । गोपालको साथी भएको हुनाले समस्यालाई धेरै बुझ्नुपर्ने व्यक्तिको रुपमा त म पो परेँ । बाबाले पनि घटना जान्न चाहेपछि गोपालकी आमाले नै भन्न थाल्नुभयो, “बेलुकाको खाना खाएपछि त्यस्तै पढाइको विषयमा चर्चा भएको थियो । उसलाई कमजोर भइस्, मेहेनत गर् भनेकी थिएँ । मैले अलिअलि गाली पनि नगरेकी हैन । तर आजभोलि निकै दिन भइसकेको थियो ऊ हामीसँग खासै नजिक पर्दैनथ्यो । अस्ति सँगै मन्दिर जाऔँ न भन्दा पनि जान मानेन । खोइ के भ’को हो, साथीसँग पनि घुम्न जानेओर्ने कुरा गर्दैनथ्यो । आज बिहानसम्म उठेको नदेखेपछि चिया लिएर ओछ्यानमा जाँदा उसलाई देखिन ।” गोपालकी आमा झनै भक्कानिएर रुन थाल्नुभयो । मैले सम्हालिनलाई आग्रह गर्न पनि सकिन ।
आदरणीय आमा–बाबा ! म गल्ति गर्न चाहन्न । म पढ्न कमजोर छु । यो मेरै कारणले हो । तर म हजुरहरूको मायाको भोको छु । म लेख्न पनि जान्ने त होइन तर समस्याले झापड हानेपछि, मन पग्लिएपछि सायद सरस्वती माता लाचार हुँदिरहिछिन् । आज यो पत्र पढेपछि तपाईँहरूले मलाई खोज्ने आवश्यकता नपरोस् । तर म आमा–बाबाको आशालाई प्रेमपूर्वक पूरा गर्न चाहन्छु ।
दिन दुगुना रात चौगुना चर्चा चल्न थाल्यो । फेसबुकमा, स्टाटस, म्यासेजहरूमा उसकै खोजीका कुरा हुन थाले । स्कुल, चोक जताततै उसकै खोजीमा सकेसम्मको प्रयास गर्न थालियो । विदेशबाट उसकै बारेमा गुनासाहरू बढिरहेका थिए । मानिसहरूका अनुमान अनि निर्देशनका ठेलीले म झनै पीडामा छट्पटिन थालेँ । टेलिभिजन, पत्रपत्रिकामा भने जानकारी दिने कि नदिने भन्ने विचारहरू पैmलिन थाले । अन्ततः सबैमा तनाव र पीडा बढ्न थाल्यो । अनेक थरी शंका उपशंकाले आफन्तहरूमा चिन्ता बढाइरहेकै थियो । गोपालकी आमाले खाना नखाएको दुईदिन भइसकेछ । बल्ल सम्झाएपछि उहाँले अलिकति खानुभयो । मलाई पनि रातदिन निद्रा लागेन । घरै छोडेर यति ठूलो पीडा दिएकोले त अलि अलि रिस पनि नउठेको होइन ।
बाबाले फोन मेरो हातमा थमाइदिनुभयो । उहाँ आफ्नै धुनमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो । एकजना बूढो मान्छेको आवाज थियो । “भाइ तिमी नै हौ ललित भनेको ?” “हो मै हो । तर मैले त हजुरलाई चिनिन नि !” त्यो आवाज भन्दा अर्कै आवाज अनायास मेरो कानमा प¥यो जसको अपेक्षामा म लगायत सबै पीडामा थियौँ –उही गोपालको आवाज । मैले उसलाई एकै साथ प्रश्नका ठेलीहरू तेर्स्याएँ, “तँ कहाँ छस्, किन घर छोडेको ? किन हामीलाई यति धेरै पीडा दिएको ?” तर उसको स्वर काँपिरहेको थियो । उसले एकजना भक्तपुरको व्यापारीसँग बिन्ति गरेर फोन गरेकाले उसले मलाई नै फोन गर्न आग्रह गर्‍यो । मैले ऊ भएको ठाउँमा तुरुन्तै आउने बाचा गरेर बाबा आमासँग भनेपछि हामी लगायत सबैतिर एक किसिमको खुसी फैलन थाल्यो ।
उसले आफ्नी आमा र बाबाको त्यो अवस्था देखेर झनै आपूmलाई सम्हाल्न सकेन । आमा–बाबासँग प्रण गर्दै भन्न थाल्यो, “मैले ठूलो गल्ति गरेँछु । अब त म कहिल्यै यस्तो गल्ति गर्दिन । मैले आफैंले नपढेर आमा–बाबाको गालीलाई ईख लिएँछु । यहाँबाट गएपछि पैसा सकिइहाल्यो । त्यसपछि मैले एकजना इट्टाभट्टाको मान्छेसँग काम दिन आग्रह गरेँ । उसले काम त दियो तर, उसका जुठा भाँडा माझ्न लगायो । अलिकति तरकारी र थोरै बासी भात दिएपछि आमाले घरमा माया गरेर दिएको खाना मीठो भएन भनेर फालेको, घुर्की लगाएको झल्झली याद आयो । पढ्नु त मेरै लागि थियो तर, मैले आमा–बाबा र गुरुहरुको लागि पढ्ने ठानेर बाबाआमाको गालीलाई ईख लिएँछु । सरी आमा–बाबा अब म पक्का पनि पढ्छु ।” ऊ रोइरहेको थियो । रुवाई मिसिएको स्वरमा ऊ अभैm भन्दै थियो, “इट्टाभट्टाको मान्छेले इट्टा लोड गर्न लगाउँदा बल्ल थाहा भयो बाबाले मलाई पढाउनका लागि कति दुःख गर्नुभएको रहेछ । मैले यी कुरा त कल्पना पनि गरेको रहेनछु ।”
उसका यस्ता कुरा सुनेपछि उसकी आमाले अँगालो हालेर गालाभरी म्वाई खान थाल्नुभयो । “छोरा अब म कहिल्यै गाली गर्दिन । मैले त्यस्तो गाली गर्नु राम्रो होइन‘थ्यो । मैले अन्जानमा बोलेको कुराले तिमीलाई ठूलो चोट परेछ ।”
उसको बाबाले अर्कोतिरबाट अँगालो हालेपछि ऊ एक्कासि बाबाको अँगालोमा परेर माफी माग्न थाल्यो । उसको टाउको सुम्सुम्याउँदै बाबाले अबदेखि केही समस्या भए घरमा भन्ने गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह पनि दिनुभयो । त्यहाँको दृश्यले सबैको अनुहारमा खुसीका रंग देखिन्थे । उलगायत उसका सबै परिवारले मलाई धन्यवाद दिनुभयो । मलाई उसको सबै घटना अझै ताजै लाग्छ । त्यस्तो गोपालले त्यसपछिका हरेक परीक्षामा राम्रो अंक ल्याएको देखेर सबै शिक्षकहरू पनि खुसी हुनुहुन्थ्यो ।
त्यो घटना घटेको तीन वर्षपछि गोपाल स्कुलको पाँचौँ मेधावी विद्यार्थीमा पर्न सफल भयो । एस.एल.सि.को नतिजा प्रकाशनको प्रतिक्षामा सबै शिक्षकलगायत हामी आतुर थियौँ । सबैभन्दा अचम्म त्यहाँ भयो जुन अप्रत्यासित थियो गोपाल विद्यालयको मात्र होइन नेपालकै प्रथम भएको रहेछ । यो पत्याउने कुरा जस्तो त धेरैलाई लागेको थिएन तर, त्यो यथार्थ थियो । गोपाल अहिले नेपाल एयरलाइन्सको मेनेजर बनेको छ । म उद्योग मन्त्रालयमा छु । हामी कहिलेकाहीँ ती विगतका घटनामा हराउँछौँ । साह्रै अविश्मरणीय लाग्दो रहेछ– विगतमा हराउँदा ।